Netherlands: Qaxootiga Soomaalida iyo kuwa kale ee loo diiday magangelyada oo la masaafurin doono – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Dowladda Netherlands ama Holland ayaa qorsheynaysa in Qaxootiga la diido Codsiyadooda Magangelyo-doonka laga jaro Taageeradda cuntada iyo hoyga ay deggan yihiin.
Wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa magaalladda London, cadadkiisa maanta ayaa lagu daabacay Qorshaha Dowladda Netherlands ee ay cadaadiska ku saarayso Qaxootiga la diido codsiyadooda, xilli ay Dowladdaha Europe gurmad u fidinayaan qulqulkii ugu ballaarnaa ee Qaxootiga ku soo jabay Europe.
Dowladda Netherlands ayaa sheegtay in dadka ku guul-daraysta codsiyadda Magangelyo-doonka Qaxootinimo in la waqti xadidan oo ah dhowr Toddobad la siinayo Hoy, ka hor inta aan laga jarin.
Qaxootigaasi haddaysan oggolaanin in dib loogu celiyo dalkooda, waxay muteysan karaan in laga masaafuriyo dalka Holland ama laga saaro Dhismooyinka.
Tan iyo bishii November ee sannadkii hore,
Isbahaysiga Midigta Dhexe ee dalka Netherlands oo uu ka tirsan Ra’isul-wasaare Mark Rutte iyo Xisbiga ka soo horjeeda dadka Muhaajiriinta ee dalkaasi waxay doonayeen in la xiro 30 Xarun oo ay Qaxootiga Magangelyo-doonka ilaa haatan ka helaan Rooti, Qubeys iyo Jiif.
Qorshaha Dowladda Netherlands ayaa ka mid ah in lix Xarumo Qaran taageero laga siinayo oo keliya dadka oggolaada in lagu celiyo dalalka Somalia.
Qorshahaasi waxa uu dhaliyey Khilaaf dhex maray Xisbiga talada haya iyo Isbhaysigooda yar ee Xisbiga Shaqaalaha, waxayna Xukuumadda dalkaasi ku sigtay inay bishii April ee la soo dhaafay burburto.
Jimcihii la soo dhaafay, Guddiga QM ee La-dagaalanka Faquuqa waxay si kulul u naqdiyeen Siyaasadda Dowladda Netherlands ee Qaxootiga, waxayna sheegeen in aan shuruud lagu xiri Krin baahida asaasiga ee Muhaajiriinta.
Ion Diaconu oo QM ka caawiyey Qorista Warbixinadaas ayaa ku tilmaamay Go’aanka Dowladda Netherlands ee ah in dadka diida in la masaafuriyo in la siiyo Hoy KMG yahay Fal Waali ah.
“Inta ay Qaxootigaaasi ku sugan yihiin gudaha dalka Netherlands waa inay ku raaxaystaan nolol heer dhexe ah” ayuu yiri .
Qaxooti tiradoodu u dhexeyso 10,000 ilaa 20,000 oo qof ayaa si sharci ah iyo si aan sharci ahayn ugu nool dalkaasi, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Kumanaan Somali ah oo laga aqbalay Codsiyadooda Magangelyo-doonka.